यी हुन् बर्ष ०७३ का उत्कृष्ट तीन चलचित्र
बर्ष ०७३ मा पनि नेपाली चलचित्रले खासै ब्यवसाहिक फड्को मार्न सकेन । अघिल्लो बर्षको तुलनामा चलचित्र बजारमा बिदेशी चलचित्रको प्रभाव कम देखिए । तै पनि प्रदर्शनमा आएका धेरै चलचित्र असफल बने । केहीले लगानी मात्र सुरक्षित गर्न सकेको देखियो भने केही चलचित्रले राम्रो ब्यवसाय गर्यो । यो बर्ष राम्रो ब्यवसाय गर्ने उत्कृष्ट तीन चलचित्रको नाम..
विनोद खन्नाको ‘मृत्यु’ मा बिजेपी नेताले दिए मौनधारणसहितको श्रद्धाञ्जली !
एजेन्सी नयाँ दिल्ली, चैत २८ – अभिनेता र सांसद विनोद खन्ना अस्पतालमा भर्ना छन् । ..
प्रतिभा निखार्न प्रशिक्षणमा जुटे लिटिल स्टार
काठमाडौं, चैत २८ – एनोवेसन इवेन्ट म्यानेजमेन्टसँग सोविज मिडिया ग्रुपको सहकार्य र..
वास्तविक जीवनमा डाक्टर हुन् कपिल शर्माको कार्यक्रममा हँसाउने यी युवक
एजेन्सी चैत २८ – कपिल शर्माको कार्यक्रम ‘द कपिल शर्मा शो’ मा कमेडी गरेर तपाईंलाई..
श्रीमानका साथी कपिल शर्मामाथि ट्वीङ्कल खन्नाको यस्तो कटाक्ष !
एजेन्सी चैत २८ – बलिउडमा आफ्नो कामका लागि बिरलै सफलता पाएकी ट्वीङ्कल खन्ना अहिल..
चैत २४ देखि १९ दिने ‘आन्दोलन’ जारी
काठमाडौं, चैत २८ – फेरि चैत २४ गते शक्रबारदेखि ‘आन्दोलन’ सुरु हुने भएको छ । यो आन्दोलन पनि ६२/६३ को आन्दोलनजस्तै १९ दिनसम्म चल्नेछ । यो पटक ‘आन्दोलन’ सडकमा नभई काठमाडौं मल सुनधारास्थित नाटकघर थिएटर मलमा हुन लागेको हो । सौरभ कार्कीको योजनामा सुदाम सिकेले ‘आन्दोलन’ नेतृत्व गर्दैछन् । २०४६ तथा २०६२/६३ को जनआन्दोलन सुरुवात [&helli..
प्रीज्माले जितिन् मिस एक्नेस, बियोन्ड ब्युटीको ताज
काठमाडौ, चैत २८ –‘मिस एक्नेस, बियोन्द ब्युटी २०१७’को ताज प्रीज्मा खोसीले जितेकी छन् । आर्मी अफिसर्स क्लबमा शनिबार आयोजित प्रतियोगीतामा अन्य प्रतिसप्रर्धीलाई पछि पर्दै उनले उपाधि चुमेकी हुन् । भाष्कर राज कर्णिकार, नायक गौरव पहाडी, गायिक इन्दिरा जोशी, चारु चड्डा, रुपेस कृष्ण श्रेष्ठ, डा.श्रद्धा र्गोखाली निर्णयक रहेको प्रतियोगीतामा..
गृह मैदानमा नेपथ्यको खुशीको आँसु
पोखरा, चैत २७ – अमृत गुरुङले ‘ए साइँला’ र ‘ए साइँली’ भनेर भाका हाल्नेबित्तिकै जताततै तन्नेरीहरु उफ्रिन थालिसकेका थिए । यो भाकालगत्तै गाउन लागेको गीत सधैजस्तै ‘चरि म¥यो शिशैको गोलीले’ हो भन्नेमा पोखरेली युवाहरु ढुक्क थिए । तर, शनिबार बेलुकी यहाँस्थित रंगशालामा कुरा बेग्लै भइदियो । लगातार दुइ घन्टासम्मको प्रस्तुतीमा त्यो गीत गाइएन..
किन लाग्यो बर्षालाई जमाना खराब ?
काठमनाडौं, चैत २७ –अभिनेत्री तथा मोडल बर्षा सिवाकोटी जवाना खराब छ भन्दै देखा परेकी छन् । गायक सूर्य तिवारीको आवाज रहेको गीत ‘जमाना खराब छ’को भिडियोमा उनी यसरी देखिएकी हुन् । गीतमा शब्द तथा संगीत मिलन जलन र सूर्य तिवारीको छ । गायक तिवारीले यो गीत भने पोर्चुगलमै बसेर रेकर्ड गराएका हुन् । श्रीधर पौडेलले […]
फिल्म अवार्ड आयोजकलाई कार उपहार
काठमाडौं, चैत २७ –अक्सर अवार्ड आयोजकलाई चलचित्रकर्मीले ताली र हौसला भन्दा पनि गाली दिने गरेका छन् । अघिल्ला बर्षको धरै अवार्डलाई नियाल्ने हो भने सो देख्न पाइन्छ । चलचित्रकर्मीले गाली दिए पनि बिभिन्न ब्यवसाहिक घरानियाहरुले अवार्ड आयोजकलाई हौसला प्रदान गर्ने गरेका छन् । यस्तैमा नवौं राष्ट्रिय बक्स अफिस फिल्म फियर अवार्डका आयोजक बक..
अर्जुन रामपालमाथि कुटपिटको आरोप
एजेन्सी मुम्बई, चैत २७ – नयाँ दिल्लीका एक युवकले बलिउड अभिनेतामाथि कुटपीटको अरोप लगाउँदै प्रहरीमा उजुरी गरेका छन् । ती व्यक्तिका अनुसार एक फाइभ स्टार होटलको पार्टीमा रामपालले उनीमाथि क्यामाराको फ्ल्यास प्रहार गरेका थिए । प्रहरीले हाललाई उजुरी दर्ता भने गरेको छ । उत्तरपश्चिम दिल्लीका वासिन्दा सोभितको थप मेडिकल रिपार्ट माग गरिएको ..
नयाँ योजनासहित मिस मंगोलको खोजी
काठमाडौं, चैत २७ –नेपाली सौन्दर्य प्रतियोगितामा आफ्नै पहिचान बनाएको मिस मंगोल नेपाल अब नयाँ शैली र ढाँचामा आयोजना हुने भएको छ । सन् २००९ देखि सुरु भएको यो प्रतियोगिताको आठौं संस्करण पूरा भइसकेको छ भने अहिले नवौं, दसौं र एघारौं संस्करणको एकसाथ तयारी सुरु भएको आयोजक एक्सन इन्टरटेनमेन्टले जनाएको छ । सन् २०१७ मा हुने […]
पत्नीभन्दा धेरै सुन अमिताभसँग, एउटै कलमको मूल्य ९ लाख
एजेन्सी मुम्बई, चैत २७ – युपीबाट राज्यसभा सदस्य जया वच्च आइतबार ६९ औँ जन्मदिन मनाइरहेकी छिन् । सन् २००४ मा पहिलोपटक निर्वाचित भएकी उनी ससन् २०१२ मा दोस्रो पटक निर्वाचित भएकी थिइन् । राज्यसभादेखि लिएर विधानसभासम्मका नेताहरुले आफ्नो सम्पत्तिको व्यहोरा बुझाउनुपर्ने हुन्छ । जया बच्चनले दिएको सम्पत्तिको व्यहोरामा पति अमिताभको सुनप्रत..
खैरेनीटारमा नविनको धमाका
काठमाडौं, चैत २७ – नयाँ बर्षलाई धुमधामले स्वागत गर्न अहिले देशका बिभिन्न स्थानमा महोत्सव आयोजना भइरहेका छन् । यसरी आयोजना भएका महोत्सवले गर्दा कलाकारलाई भ्याइन नभ्याइ हुने गरेको छ । कतिपय कलाकारले त एकै दिन दुई वा तिन महोत्सवमा समेत आफ्नो प्रस्तुति दिने गरेका छन् । यस्तै कलाकार मध्यका एक हुन् ¬–लोक गायक नविन पौडेले […]
राष्ट्रिय बक्स अफिस फिल्म फियर अवार्डको उत्कृष्ट पाँच नोमिजिन सार्वजनिक (सूचिसहित)
काठमाडौं, चैत २७ –नवौं राष्ट्रिय बक्सअफिस फिल्म फियर अवार्डको उत्कृष्ट पाँच भित्र पर्ने कलाकार, चलचित्रकर्मी तथा प्राबिधिकको नाम सार्वजनिक गरिएको छ । सुन्धरास्थित आर्मी अफिसर्स क्लबमा आयोजित एक कार्यक्रममा आयोजक बक्सअफिस फिल्म क्लबले सो सार्वजनिक गरेको हो । सार्वजनिक उत्कृष्ट पाँच भित्र अहिलेका चदलेका कलाकार र प्राबिधिक सबै अटाए..
सोनी टिभीले कपिलको कार्यक्रमको साटो सुनिलको कार्यक्रम राख्ने ? यस्तो भन्छन् मिडिया
एजेन्सी चैत २६ – यो वर्ष कपिल शर्मालाई फापेन । उनको स्थिती दिनप्रतिदिन बिग्रँदो छ । सहकर्मी सुनिल ग्रोवरसँगको उनको झगडा साम्य हुने नामै लिँदैन । दैनिकजसो हामीले उनीहरुबारे केही नयाँ जानकारी पाएका हुन्छौं तर स्थिती सप्रनुको साटो बिग्रँदो छ । मिडियामा पुनः अर्को खबर फैलिएको छ । केही भारतीय मिडियाले दाबी गरे अनुसार सोनी […]
इन्स्टामा हिट छिन् ज्याकी श्रोफकी छोरी, हरेक फोटोमा आउँछन् हज्जारौं लाइक (फोटोफिचर)
एजेन्सी चैत २६ – ज्याकी श्रोफकी छोरी र टाइगर श्रोफकी बहिनी कृष्णा २४ वसन्तमा छिन् । उनी लगातार इन्स्टाग्राममा विभिन्न तस्बिर सेयर गरिरहन्छिन् । सोसल मिडियामा उनलाई निकै मन पराइन्छ । उनको इन्स्टाग्राममा दुई लाखभन्दा धेरै फलोअर्स छन् । केही समय पहिले मात्र कृष्णाले एक बिकिनी फोटो सेयर गरेकी थिइन् जसको क्याप्सनमा उनले लेखेकी थिइन्,..
विवेक ओबरोईको घरमा चोर पस्यो, चोरको नाम थाहा पाउँदा दङ्ग हुनुहुनेछ !
एजेन्सी चैत २६ – फिल्म अभिनेता विवेक ओबरोयको घरमा शुक्रबार अचानक चोर पस्यो । विवेकले निकै आत्तिदैं आफ्नो घरलाई सुरक्षित राखी उक्त चोरलाई समात्न सफल भए र यसबारे पुलिसलाई पनि जानकारी दिए । जब पुलिस विवेकको घर पुगे तब चोरको अनुहारको नकाब उतार्दा ओबरोईसहित सबैजना चकित परे । चोर वास्तवमा चोर थिएनन् उनी एक नायक […]
अक्षयले जिते नेशनल अवार्ड, ट्वीटरमा यसरी उडाइयो उनको खिल्ली !
नयाँ दिल्ली, चैत २६ – ६४ औं नेशनल फिल्म अवार्डको घोषण शुक्रबार भयो जसमा फिल्म ‘रुस्तम’ का लागि अक्षय कुमारलाई उत्कृष्ट नायकको रुपमा चुनिएको छ । २६ वर्षको फिल्मी करियरमा अक्षयले पहिलो पटक नेशनल अवार्ड जितेका हुन् । अवार्डको घोषणा हुनेबित्तिकै सोसल मिडियामा मानिसहरुले अक्षयलाई बधाई दिन सुरु गरे । अक्षयले पनि भिडियो पोष्ट गरेर [&he..
अक्षयले जिते नेशनल अवार्डः ट्ंवीकल खन्ना हाँस्ने र रुने स्थितीमा
एजेन्सी चैत २५ – ६४ औं नेशनल अवार्डको घोषणा शुक्रबार भएको छ । नेभी अफिसर केएम नानावतीको जीवनमा आधारित फिल्म ‘रुस्तम’ मा उनको भूमिका निभाउने फिल्म अभिनेता अक्षय कुमारलाई उत्कृष्ट नायक घोषणा गरिएको छ । अक्षयकी श्रीमती ट्वींकल खन्नाले अक्षयको भिडियो मेसेज सेयर गर्दै ट्वीटरमा लेखे, ‘म हाँस्ने कि रुने, मैले केही बुझ्न सकेको छैन [&hel..
भूटानी शरणार्थीको जीवनमाथि ‘देश खोज्दै जाँदा’
काठमाडौं, चैत २५ – भूटानी शरणार्थीहरुको कथामाथि निर्माण भएको फिल्म ‘देश खोज्दै जाँदा’को अफिसियल ट्रेलर आएको छ । दुई मिनेट ६ सेकेण्डको ट्रेलरमा भुटानी शरणार्थीको आन्दोलन, दुःख, भावना र यथार्थलाई देखाउने प्रयास गरिएको छ । १२ जेठ बाट प्रदर्शनमा आउने बताइएको फिल्मलाई साहित्यकार प्रकाश आङदेम्बेले निर्देशन गरेका हुन् । यो उनको डेब्यु ..
निश्चलले नै धेरै फकाउँछन् – स्वस्तिमा खड्का
हिट चलचित्र ‘होस्टल रिटन्र्स’बाट कलाक्षेत्रमा डेब्यु गरेकी हुन् अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्काले । पहिलो चलचित्रबाट नै उनी सफलताको झण्डा गाड्न सफल रहिन् । अभिनयको सफलता सेलाउन नपाउँदै निर्देशक निश्चल बस्नेतसँगको लगनगाँठो उनको अर्काे चर्चाको विषय बन्यो । केही वर्ष अगाडि उनले निर्देशक निश्चल बस्नेतसँग लगनगाँठो कसेकी हुन् । म्युजिक भिडि..
पुनम पाण्डेलाई डेट गरिसकेका छन् विनोद खन्नाका छोरा ! यस्तो छ जीवनशैली
एजेन्सी चैत २५ – अक्षय खन्ना र राहुल खन्नाका साथै विनोद खन्नाका अर्का एक छोरा छन् जसको नाम साक्षी खन्ना हो । साक्षी अहिले २५ वर्षका भएका छन् र उनी आफ्नो इन्स्टाग्राम फोटोका कारण निकै चर्चामा रहन्छन् । साक्षीले यसवर्ष फिल्ममा प्रवेश गर्ने आंकलन गरिएको छ । वास्तवमा साक्षी खन्नाले संजय लिला भंसालीलाई उनको फिल्म […]
दयाहाङले यसरी घर भित्राए केकी
काठमाडौं, चैत २५ –संचारकर्मी दीपेन्द्र लामाको निर्देशनमा डेब्यु चलचित्र ‘घामपानी’ तामाङ सेलो गीत सार्वजनिक गरिएको छ । ‘आपालाई मेरो’ बोलको गीतमा चन्द्रकुमार दोङको संगीत, फूलकुमार बम्जनको शब्द, सञ्जिव वाइवा, फूलकुमार बम्जन र जितु लोप्चनको स्वर छ । ‘घामपानी’ वैशाख १ गतेबाट प्रदर्शनमा आउने चलचित्र हो । चलचित्रमा दयाहाङ राइ र केकी अध..
पूर्वराजको भोजमा मनिषा कोइरालादेखि कोमल ओलीसम्म देखिए
काठमाडौं, चैत २४ –पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रद्र शाहले आफ्ना नाति हृदयन्द्रको उपनयन (ब्रतबन्ध)का अवसरमा आयोजना गरेको पार्टीमा नेपाली मुलकी बलिउड अभिनेत्री मनिषा कोइराला पनि पुगेकी छन् । कोइराला बिहिबार दिउँसो पूर्व राजाको निम्ता मान्न होटल सोल्टी पुगेकी हुन् । पहेलो रंगको आकर्षक सारीमा सजिएर उनी पार्टीमा पुगेकी थिइन् । पार्टीको अत्यत..